Maxay baaqashada kulamadii Golaha Shacabka muddo afar todobaad ah ka dhigan tahay? – Kalfadhi
Maxay baaqashada kulamadii Golaha Shacabka muddo afar todobaad ah ka dhigan tahay?
Shaqada ugu muhiimsan Golaha Shacabka waa dejinta ama sameynta sharciyada, waxaana ugu soo xiga kormeeridda shaqada Xukumadda iyo dhamaan laamaha dowladda ee kale, iyadoo tan saddexaadna ay u tahay iney si sax ah u matallaan dadkii soo doortay.
Mid ka mid ah shaqooyinkii ugu muhiimsanaa Golaha, oo ah iney dalka u sameeyaan shuruuc, ayaa muddo bil ah hal maalin oo kaliya laga shaqeeyey. Inkasta, oo uu khilaaf jiray, haddana dad ay Xildhibaanno ka mid yihiin ayaa rumeysan inuu Goluhu qabsan karay shaqadiisa.
Xildhibaanno fara badan ayaa, tiri aan yareen, ku celcelisay inuu Goluhu bilaabo hawshiisa, Guddoonkuna ku dhawaaqo dib u billaabidda shaqada Golaha Shacabka. Xitaa Xildhibaannadu iyagoo kala ra’yi duwan ayey si isku mid ah u dalbanayeen sidaas.
Iyada oo Xeerarka uu ansixiyey Golaha Shacabka ay aad u yaraayeen muddadii 2-da sana ahayd ee uu jiray Baarlamaanka 10-aad ayaa, haddana kulamada baaqday, waxaa la rumeysan yahay iney dib u dhigi karaan shaqooyin uu Goluhu qaban lahaa muddo xiliyeedkiisa 4-ta sana ah, oo ay 2 ka mid ah baxday.
Kualamada Golaha Shacabku waxay dhacaan Sabti, Isniin iyo Arbaco, waxaana kulamada Golaha ee baaqday 2-dii bil ee ugu dambeysay ka mid ah kulamadii dhici lahaa 26-kii iyo 28-kii Nofeembar iyo 1-dii, 3-dii, 8-dii, 10-kii, 12-kii, 15-kii, 17-kii, 19-kii iyo 22-kii Diseembar oo maanta ah, waxayna u dhigantaa inuusan Golaha Shacabku kulmin muddo bil ah.
Dad ay Xildhibaanno ka mid yihiin ayaa qaba walaac ah inta jeer ee ay Kulamada Goluhu dib u dhici karaa 2-da sano ee harsan, maadaama kala ra’yi duwanaanta dadku dabiici tahay, marar bandanna ay imaan karaan ineysan Xildhibaannada ama Guddoonka Goluhu isku meel kawada arkeyn arrimaha xasaasiga ah ee taagan, oo ah wixii soo dhacayey 2-dii bil ee ugu dambeeyey.
Haddii walaacaas uu dhab noqdo waxay hoosta ka xariiqeysaa inuu Baarlamaanka 11-aad ee soo socda kala wareego Baarlamaankan shaqo fara badan, oo ay ahayd inuu qabto muddadiisa 4-ta sano ah. Waxayna taasi keeni kartaa in dowlad wanaag gaarsiinta Soomaaliya ay dib u dhacdo sanado kale.
Golaha Shacabka oo 25-ka bishii hore ilaa maanta yeeshay hal kulan oo kaliya